तिज गीतमा बिकृती, चर्चामा आउन हतार किन? अश्लिल शब्द प्रयोग गरिदै(भिडियो) - Tufan Media News
तिज गीतमा बिकृती, चर्चामा आउन हतार किन? अश्लिल शब्द प्रयोग गरिदै(भिडियो)
१८ श्रावण २०७६, शनिबार ११:३० 280 पटक हेरिएको
केहि सँगितकमीैहरु र सँगीत बिश्लेषकहरुले यो शब्दको बिरोध गरेका छन । यस बिषयमा हामीले यो गीतको गायक रिजन थापा मगर सँग सम्पर्क गर्ने खोज्यौ तर उहाँ सँग सम्पर्क स्थापित हुन भने सकेछ ।
यसै बिच यस बिषयमा गीतकी गायिका जुना श्रिस मगरले पनी आप्त्तीजनाएकी छिन,उनले आफुले यो थम्नेल हटाउन बारम्बार अनुरोध गर्दा पनी नहटाईएको र मोबाईलनै अफ गरेर बसेको जनाएकी छिन। पढ्नुहोस उनले फेसबुकमा लेखेको स्टार्टस जस्ताको तस्तै:
मनसुन क्रियशनको यु ट्युव च्यानल मार्फत सार्बजनिक भएको सिरैमा गम्छा दुधको मुन्छो छुदा बोलको गीतमा चर्चित गायीका जुना श्रीस मगर र रिजन थापा मगरको सुमधुर स्वर रहेको छ । रिजन थापा सानै उमेर धेरै दर्शक श्रोताहरुको मनमा बस्न सफल गायत तथा सर्जक हुन ।
उनले गाएका तथा शब्द लय सिर्जना गरेको कतिपय गीतहरु बजारमा चर्चामा रहेको छ । थापाको तगारो तिम्लाई सम्झिदै रुन पर्ने हो की कहा गयौं एक्लो शंख डिम्पल पर्नै गाला लगायतका गीतहरु बजारमा रहेका छन ।
याम थापा मगरको लय शब्द तथा एरेन्ज रहेको यो गीतलाई मारुनी डिजिटलमा रर्कड गरिएको थियो ।
चर्चाको निकै सम्भावना बोकेको मोडल सिमा ढकाल र प्रकाश सापकोटाको यो गीतको म्युजिक भिडियोमा अभिनय रहेको छ ।
केशवराज भट्टको निर्देशन रहेको गीतको म्युजिक भिडियोमा बासु बरालको छायाँकन तथा बिकाश दहालको सम्पादन रहेको छ । सम्रगमा यो गीत निकै राम्रो भएको छ । गीतको प्रयोग भएका शब्दहरु निकै मौलिक र उत्कृष्ट पनि रहेका छन ।
हेर्नुहोस गीतको म्युजिक भिडियो